▷ Izikhulisi zamanzi ezihamba phambili ze-aquarium | Okwezinhlanzi
Isilondolozi samanzi siyinto edingeka kakhulu ukuhlanza amanzi aqhamuka ngqo empompini. futhi uyenze ifanele ukuze izinhlanzi zakho zikwazi ukuhlala kuyo ngaphandle kokwesaba i-chlorine nezinye izinto ezikhona emanzini ompompi eziyingozi kangako empilweni.
Kulesi sihloko sizokhuluma ngakho imikhiqizo engcono kakhulu yokulungisa amanzi, ngaphezu kokukutshela ukuthi i-conditioner yenzelwe ini, uma kunesidingo sokuyisebenzisa nokuthi isetshenziswa kanjani. Ngaphezu kwalokho, sincoma ukuthi ufunde le ndatshana amanzi ongawasebenzisa kuma-aquariums ukuze ube uchwepheshe weqiniso.
1 Ama-Conditioners Amanzi ahamba phambili e-Aquarium
2 Yini i-aquarium conditioner yamanzi futhi yenzelwe ini?
3 Ama-Conditioners Amanzi ahamba phambili e-Aquarium
3.1 I-conditioner ephelele kakhulu yamanzi
3.2 I-Tetra Aqua Safe yamanzi ompompi
3.3 I-Conditioner enokusetshenziswa okuningi
3.4 Isihlanzisi Samanzi Amanzi Amanzi
3.5 I-Easy Life Conditioner
4 Kunini lapho kudingeka usebenzise ama-conditioner amanzi e-aquarium?
5 Ungasisebenzisa kanjani isilondolozi samanzi se-aquarium
6 Ungasithenga kuphi isilondolozi samanzi esishibhile se-aquarium
Ama-Conditioners Amanzi ahamba phambili e-Aquarium
I-Tetra AquaSafe 500 ml ...
Seachem Izinwele Conditioner ...
Yini i-aquarium conditioner yamanzi futhi yenzelwe ini?
Isifaki manzi, njengoba igama liphakamisa, yi- umkhiqizo okuvumela ukuthi welaphe amanzi ompompi, okungahle kube yingozi ekudobeni, futhi bayilungise ukuze bayenze indawo lapho behlala khona.
Ngakho-ke, ama-conditioner amanzi amathini agcwele uketshezi okuthi, lapho luphonswa emanzini (njalo ngokulandela imiyalelo yomkhiqizo, kunjalo) banesibopho sokuqeda lezo zinto, njenge-chlorine noma i-chloramine, eziyingozi ezinhlanzini zakho.
Emakethe uzothola ama-conditioner amaningi amanzi, yize kungewona wonke anekhwalithi efanayo noma enza ngokufanayo, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe umkhiqizo osezingeni eliphakeme (phela sikhuluma ngempilo yenhlanzi yakho). Sikulungiselele ukukhethwa kwakho ngokuhamba phambili:
I-conditioner ephelele kakhulu yamanzi
I-Seachem ingumkhiqizo omuhle kakhulu ngesinye sezipholisi zamanzi eziphelele emakethe. Ayinawo osayizi abangaphansi nangaphansi abane ongabakhetha kuya ngenani lamanzi aqukethe i-aquarium yakho (50 ml, 100 ml, 250 ml kanye no-2 l), yize isakazeka kakhulu, ngoba kufanele usebenzise 5 kuphela ml (ikepisi elilodwa) lomkhiqizo njalo ngamalitha amanzi angama-200. ISeachem Conditioner isusa i-chlorine ne-chloramine futhi ikhipha ubuthi i-ammonia, i-nitrite ne-nitrate. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa izindlela ezahlukahlukene, ngokusho komkhiqizo, ukuzivumelanisa nenkinga yamanzi. Isibonelo, uma inenani eliphakeme kakhulu le-chloramine, ungasebenzisa umthamo ophindwe kabili, ngenkathi iphansi kakhulu, uhhafu wedosi uzokwanela (sigcizelela ukuthi ubheke imininingwane yomkhiqizo ngaphambi kokwenza noma yini).
I-Tetra Aqua Safe yamanzi ompompi
Lo mkhiqizo usebenza kakhulu, ngoba ikuvumela ukuthi uguqule amanzi ompompi abe ngamanzi aphephile wezinhlanzi zakho. Umsebenzi uyafana noweminye imikhiqizo yalolu hlobo, ngoba uqukethe nje ukuthela umkhiqizo emanzini (ngokuhamba kwesikhathi, kwesinye isigaba, sizokukhombisa igxathu negxathu ukuthi ungakwenza kanjani). Yize ingasabalaliswanga njengeSeachem, ngoba isilinganiso singama-5 ml ngamalitha ayi-10 amanzi, inefomula ethakazelisa kakhulu evikela izinhlungu nolwelwesi lwamafishi ezinhlanzi zakho. Ngaphezu kwalokho, kufaka phakathi inhlanganisela yamavithamini asiza ukunciphisa ukucindezeleka ezifuyweni zakho.
I-Conditioner enokusetshenziswa okuningi
Fluval Izinwele Conditioner ...
Amanye ama-conditioner, afana nalawa avela ku-Fluval, awakhelwanga kuphela ukulungisa amanzi ngesikhathi sokushintsha kwamanzi, kodwa futhi zingasetshenziselwa ukwengeza izinhlanzi ezisanda kufika e-aquarium, ngokushintsha kwamanzi okuyingxenye noma ukuhambisa izinhlanzi kwenye i-aquarium. Kulula ukuyisebenzisa njengamanye amamodeli, isusa i-chlorine ne-chloramine, ithambisa izinsimbi ezisindayo ezingaba khona emanzini futhi ivikele amaphiko ezinhlanzi. Ngaphezu kwalokho, ifomula layo lifaka inhlanganisela yamakhambi okuzola asiza ukunciphisa ukucindezeleka.
Isihlanzisi Samanzi Amanzi Amanzi
Phakathi kwabahlanzayo noma ama-conditioner ama-aquariums asemanzini angenasawoti sithola lo mkhiqizo omuhle, iBiotopol, okuthi, ngesilinganiso esingu-10 ml womkhiqizo ngamalitha angama-40 amanzi inesibopho sokususa i-chlorine, i-chloramine, ithusi, ukuhola ne-zinc. Ungayisebenzisa kuzo zombili izinguquko zamanzi eziphelele nezincanyana, ngaphezu kwalokho, isebenza ekuthuthukiseni ukuvikelwa kwezinhlanzi ezisanda kutholwa yisifo, ngoba kubandakanya, neminye imikhiqizo, ingxube yamavithamini esiza futhi ukunciphisa ukucindezeleka.
Lokhu kuhlanza amanzi iza ngamabhodlela uhhafu welitha futhi ingasetshenziswa kuma-aquariums lapho kuhlala khona izinhlanzi nezimfudu zamanzi angenasawoti.
I-Easy Life Conditioner
I-Easy-Life AQM0250 ...
Lesi silondolozi samanzi, esitholakala ngebhodlela elingu-250 ml, senza lokho okuthembisayo: ibeka amanzi empompini futhi iwenze alungele izinhlanzi zakho ngokususa i-chlorine, i-chloramine ne-ammonia. Ukusebenza kwayo kulula njengabanye, ngoba kufanele ungeze kuphela inani elibonisiwe lomkhiqizo kumalitha amanzi akhonjisiwe. Ungayisebenzisa kokubili ekushintsheni kokuqala kwamanzi nasezingxenyeni, futhi ingasetshenziswa nasemanzini lapho kuhlala khona izimfudu.
Kunini lapho kudingeka usebenzise ama-conditioner amanzi e-aquarium?
Yize amanzi ompompi evame ukuphepha ukuthi abantu bawaphuze (yize kungenjalo njalo noma yonke indawo), inani lezinto ezingaphephile zezinhlanzi alipheli. Kusuka ku- i-chlorine, ama-chloramine kuzinsimbi ezisindayo ezifana nomthofu noma i-zinc, amanzi ompompi akuyona indawo ephephile yezinhlanzi zethu. Ngakho-ke, ukuhlala ucabanga ngenhlalakahle yakho, kubalulekile ukusebenzisa isilondolozi samanzi kusukela ngomzuzu wokuqala.
Ama-conditioner amanzi avumela lokhu ukuthi kube njalo. Ukwenza isibonelo, bashiya amanzi ompompi njengendwangu engenalutho izinhlanzi zakho ezingaphila kuzo ngokuphepha. Ngemuva kwalokho, ungasebenzisa neminye imikhiqizo ethuthuka ngokwebhayoloji (okungukuthi, ngokwesibonelo, ibangela ukuthi amabhaktheriya “amahle” ande) emanzini ase-aquarium yakho bese ngaleyo ndlela uthuthukise izinga lempilo yezinhlanzi nezitshalo zakho.
Ekugcineni, kubalulekile futhi ukuthi ungagcini ukusetshenziswa kwe-conditioner ekushintsheni kokuqala kwamanzi. Landela imiyalo yomkhiqizo, ezokutshela ukuthi ungayisebenzisa kanjani, imvamisa ngamanani aphansi, ekushintsheni kwamanzi okuyingxenye, noma ukubeka izinhlanzi ezisanda kufika, zithuthukise amasosha omzimba ngemuva kokugula noma ukunciphisa ukucindezeleka.
Ungasisebenzisa kanjani isilondolozi samanzi se-aquarium
Ukusebenza kwamanzi okulungisa i-aquarium bekungeke kube lula, kepha, imvamisa kudala ukungabaza okumbalwa esizoqeda ngakho.
Okokuqala, i-conditioner isebenza ngokumane uyingeze emanzini we-aquarium, kungaba ngoshintsho lwamanzi noma ngenguquko ethile (ngokwesibonelo, ngemuva kokuphonsi phansi).
Okunye ukungabaza okujwayelekile ukuthi ngabe i-conditioner ingangezwa yini ngenkathi izinhlanzi zise-aquarium. Impendulo ithi, ngezimo ezihle kakhulu, kungenziwa, ngoba zisakazeka emanzini ngomzuzwana. Kodwa-ke, abanye benza ngendlela ehamba kancane, ngakho-ke kungcono, ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle, lokho setha izinhlanzi zakho eceleni esitsheni esihlukile ngenkathi ufaka i-conditioner amanzi.
Ungabuyisela izinhlanzi zakho emanzini ngemizuzu eyishumi nanhlanu, ubude besikhathi obujwayelekile obuthatha ukuthi ama-conditioner ahamba kancane asakaze futhi asebenze emanzini wonke.
Ngokuvamile, ama-conditioner amanzi aphephile ngezinhlanzi zakho, kepha angaba yingozi uma unganamatheli kokucacisiwe komkhiqizo. Ngoba, kubalulekile ukuthi unamathele kokucacisiwe futhi ungangezi imithamo eyengeziwe ye-conditioner.
Ekugcineni, kuma-aquariums amasha, noma ngabe uwaphuza ngamanzi nge-conditioner kuzofanela ulinde inyanga ukufaka izinhlanzi zakho. Lokhu kungenxa yokuthi wonke ama-aquariums amasha kufanele aqhubeke nenqubo yokuhamba ngebhayisikili ngaphambi kokuhlalisa izinhlanzi.
Ungasithenga kuphi isilondolozi samanzi esishibhile se-aquarium
Ungathola ama-conditioner amanzi ezindaweni eziningi, ikakhulukazi ezitolo ezikhethekile. Ngokwesibonelo:
En Amazon Ngeke uthole kuphela ama-conditioners asezingeni eliphakeme, kepha futhi ngamanani ahluke kakhulu nemisebenzi ehlukile (i-conditioner emsulwa futhi elukhuni, i-anti-stress…). Into enhle ngalesi sitolo se-mega ukuthi, uma unenkontileka ngenketho ye-Prime, uzoba nayo ekhaya ngomzuzwana. Ngaphezu kwalokho, ungaqondiswa ngamazwana ukwazi ukuthi yikuphi okukufanele kakhulu.
En izitolo ezikhethekile zezilwane ezifuywayoNjengoKiwoko noma iTrendenimal, uzothola nenani elikhulu lama-conditioner. Ngaphezu kwalokho, banezinhlobo zomzimba, ongaya ngazo mathupha bese ubuza imibuzo engavela.
Yize, ngaphandle kokungabaza, lowo onenani elingenakuhlulwa yilona Iketango lezitolo ezinkulu iMercadona kanye nokwelashwa kwayo ngamanzi ompompi kaDkt Wu, avela kuhlobo lweTetra. Yize, ngenxa yobukhulu bayo, kunconyelwa amathangi namathangi ezinhlanzi amancane, hhayi izifundiswa esezivele zinethangi elilingana neLake Titicaca, enconyelwa eminye imikhiqizo namafomethi.
I-aquarium water conditioner iyisisekelo esivumela amanzi ukuthi abe yindawo ephephile yezinhlanzi zethu. Sitshele, usebenzisa muphi umuthi wamanzi? Ingabe kukhona umkhiqizo othile owuthandayo noma ungakaze uzame ukusebenzisa i-conditioner okwamanje?
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » Izesekeli » Isilungisi samanzi se-Aquarium